Laamaha Amniga oo bilaabay dhaqan gelinta Amar kasoo baxay Galmudug - Awdinle Online
Laamaha Amniga oo bilaabay dhaqan gelinta Amar kasoo baxay Galmudug
Laamaha Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ee Degmada Gaalkacyo ayaa xalay bilaabay Dhaqan galinta Amar uu soo saaray Maamulka degmada Gaalkacyo kaas oo Mooto Bajaajta looga Mamnuucay Sameecadaha waa weyn ee ka shidan yihiin Heesaha ka dib Cabasho ka timid Bulshada Magaalada.
Waxaa Mootoyinka laga dajinayay Sameecadaha iyadoo sidoo kale lagu wargaliyay inaysan shaqeyn karin wixii ka Dambeeya farta Saac, taas oo ay Cabasho ka muujiyeen Dhalinyarada ku xamaalata Bajaajta. Booliska oo taas dhaqan galinaya Ayaa tiro dhalinyaraa ka xareeyay Mootooyinkay ku shaqaysanayeen.
Qorshaha Joojinta shaqada Bajaajta ee wixii ka dambeeya afarta Saac waa caqabad weyn oo saamayn ku yeelanaysa Shaqada Dadka ku xamaalata Bajaajta, taas oo aan ku jirin amarkii Maamulka degmada, balse arintaan oo sii socota ayaa waji gabax ku noqonaysa Maamulka degmada Gaalkacyo.
Sidokale Qofkii Bajajtiisa Laga Xaristaa Wax uu dib uheli karaa Hadii uu Lacag Laaluush ah Bixiyo Sida ay Noo Xaqijiyeen Dadkii La Kulmey Dhacdadaas.
Previous articleQorshe lagu kala saarayo Ciidamada Dowladda oo lagu eedeeyay Jen. Odowaa & Taliyaha Ciidamada Dhulka
Next articleWaqtiga la soo geba gabeynayo dhageysiga dacwadda Badda oo la shaaciyay